Sheekada filimka Mulk: Bandhiga Rishi iyo Taapsee Pannu lagu daray sheeko wacan ugu imaaw – Filimside.net
Sheekada filimka Mulk: Bandhiga Rishi iyo Taapsee Pannu lagu daray sheeko wacan ugu imaaw
August 4, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 4, 2018
Waxaa tiyaatarada saaran filimka Mulk ee fariinta adag xambaarsan kaasi oo siweyn sheeko ahaan loo hadal haayo madaama mowduuc xasaasi ah ka hadlaayo.
Jilaayaasha filimkan: Rishi Kapoor, Taapsee Pannu, Ashutosh Rana, Rajat Kapoor, Manoj Pahwa, Neena Gupta, Kumud Mishra, Prateik Babbar, Prachee Shah Paandya, Vartika Singh, Ashrut Jain, Indraneil Sengupta.
Muxuu ku wanaagsan filimkan: Bandhiga Rishi iyo Taapsee oo aan indha laga qaadi karin fariintiisa oo waaqici ah kana hadleyso dhibaatada Muslimiinta Hindiya ku nool heesato gaar ahaan dhanka garsoorka iyo sharafkooda
Muxuu ku liitaa filimkan: kaliya dhaliishiisa waxay tahay inuusan ahayn filim fariin ganacsi xambaarsan ahayn waayo madadaalo, Dance iyo Action malahan.
Qiimeynta sheekada filimka Mulk: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 20-daqiiqo
Fariinta filimka Mulk oo kooban: waa filim ka hadlaayo sida qoys Muslim ah loo bur burinaayo sharci ahaan iyo jiritaan ahaan kadib markii mid iyaga ka mid ah lagu eedeenayo inuu fal argagaxis ku lug leeyahay.
Murad Ali Mohammed (Rishi Kapoor) waa qareen laga tixgaliyo magaalada Varanasi wuxuuna mudo dheer ku nool yahay dhismo qadiimo ah oo ay kula nool yihiin Txaaskiisa Badi Tabassum (Neena Gupta), walaalkiis Bilal (Manoj Pahwa), dumaashidiisa Choti Tabassum (Prachee Shah Paandya), gabadha uu adeerka u yahay Aayat (Vartika Singh) iyo wiilka uu adeerka u yahay Shahid (Prateik Babbar).
Qoyskan waxay diyaarsadeen xaflad weyn xili loo dabaal dagi rabo sanad guurada 65-aad ee Murad Ali Mohammed (Rishi Kapoor).
Sidoo kale Murad Ali Mohammed (Rishi Kapoor) gabadha uu sodaga u yahay Aarti (Taapsee Pannu) oo u dhaxdo wiilkiisa Aftab (Indraneil Sengupta) ayaa London ka imaanayaan si ay farxada qoyskan uga qayb qaataan weliba si kadis ah.
Isla habeenka farxada qoyskan dhigan lahaayeen waxaa qarax inuu geestay lagu eedeenayaa Murad wiilka uu adeerka u yahay Shahid (Prateik Babbar) waxaana tooganayaan booliska kadib markii CCTV laga arkaayo.
Wixii markaas ka dambeeyo Murad qoyskiisa oo dhan qolyaha dambi baarista ayaa daba dhiganayaan isagana xabsi ayaa la galinaa waxaana lagu eedeenaa inuu isaga ka dambeeyay falkii uu geestay wiilka uu adeerka u yahay.
Murad oo dhibane sharciga u noqday waxaa si geesinimo ku dheehan u difaaceyso gabadha uu sodaga u yahay Aart (Taapsee Pannu) oo weliba Hinduu ah sidoo kalena qareen u noqoneyso si ay maxkamada kaga bad baadiso.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Mulk Qaabka Loo Dhigay:
Director Anubav Sinha si cajiib badan ayuu sheekada filimka Mulk u dhigay weliba filimkan doorarkiisa waa badan yihiin hadana laguma wareerayo oo si cadd oo soo jiidasho leh ayuu fariintiisa isugu daba riday.
Inta badan waxaa lagu dhaliilay filim sameeyahan aflaantiisa caanka ah DUS , CASH  iyo RA.ONE  qaabkii uu sheekadooda u dhigay laakiin Mulk ayuu hadda la yimid sheeko ahaan si wacan la isugu daba riday.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Mulk: Ruug cadaa Rishi Kapoor wuxuu la yimid bandhig taariikhi ah oo ay qasab tahay in abaal marin lagu siiyo madaama door xasaasi ah oo dhib badan uu doortay hadana si heer sare ah ayuu kaga baxsaday.
Rishi waayo dheer oo qurux badan ayuu fanka kusoo qaatay laakiin Mulk waa qasab jiliin ahaan inuu safka hore kasoo galo aflaantiisa lagu xasuusan doono xili walbo.
Inaba caadi ma ahan doorka ay qaadatay Taapsee Pannu oo qaybta hore wanaagsan laakiin qaybta dambe filimkan waxaaba loo daawanaa sida kiiska maxkamada Murad iyo qoyskiisa ay u difaaceyso waa hubaal atirishadan inay in badan ka jiliin wanaagsan tahay atirishooyinka la buun buuniyo xiligaan waayo Taapsee shaqadeeda ayaa hadasho ee baraha bulshada kuma hadasho!!
Gunaanad: Mulk waa filim fariintiisa aad u wacan tahay balse ganacsigiisa xadidnaan doono kaliya wuxuu isku haleen doonaa in dadka sheekadiisa amaanaan kadibna tiyaatarada lasoo aado maal maha sabtiga iyo axada ee ma ahan filim fagta hore ganacsi adag sameyn karo.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Mulk ee sheekadiisa aadka loo wada amaanay:
Waxaa Aqrisay 725